አሞጽ 6 NASV – Amos 6 AKCB | Biblica
አሞጽ 6 NASV – Amos 6 AKCB
1Nnome nka mo a mugye mo ho di wɔ Sion,
ne mo a mo asom adwo mo wɔ Samaria bepɔw so,
mo atitiriw a mowɔ ɔman a edi kan mu,
a Israelfo ba mo nkyɛn!
2Monkɔ Kalne nkɔhwɛ hɔ.
Na mumfi hɔ nkɔ Hamat kɛse mu,
munsian nkɔ Gat a ɛwɔ Filistia.
Woye sen mo ahemman abien no?
Wɔn asase no so sen mo de no ana?
3Mutu da bɔne hyɛ da
na motwe atemmuda bɛn.
4Modeda asonse mpa so
mugye mo ahome wɔ mo nnae mu,
na mowe nguantenmma ne
nantwimma a wɔadodɔ srade nam.
5Mode mo sankuten to ahuhunnwom,
na mobɔ mo tirim yɛ nnwom wɔ
mo nnwontode so te sɛ Dawid.
6Monom nsa wɔ nkora mu
na mode sradehuam papa yɛ mo ho,
na munni awerɛhow wɔ Yosef sɛe ho.
7Ɛno nti, mobɛka wɔn a wodi kan twa wɔn asu no ho;
na mo aponto ne mo ahomegye to betwa.
Awurade Kyi Israel Ahomaso
8Otumfo Awurade aka ne ho ntam
na nea Asafo Awurade Nyankopɔn se ni:
“Mikyi Yakob ahomaso
na mempɛ nʼaban;
mede kuropɔn no bɛma
ne nea ɛwɔ mu nyinaa.”
9Sɛ wogyaw nnipa du wɔ ofi baako mu a, wɔn nso bewuwu. 10Na sɛ obusuani a ɔrebɛhyew awufo no ba sɛ ɔrebɛfa wɔn afi fie hɔ na obisa obi a wakɔtɛw se, “Obi ka wo ho ana?” Na obua se, “Dabi” a, afei ɔbɛka se, “Mua wʼano!” Ɛnsɛ sɛ wɔbɔ Awurade din.
11Na Awurade ahyɛ mmara
na obebubu afi akɛse no mu asinasin
ne afi nketewa no nso mu nketenkete.
12Apɔnkɔ tu mmirika wɔ abotan a apaapae so ana?
Na obi de nantwi funtum hɔ ana?
Nanso moadan atɛntrenee ayɛ no awuduru.
Na trenee nso ayɛ nwenweenwen.
13Mo a mo ani gye Lo-debar nkogu ho,
na mubisa se, “Ɛnyɛ yɛn ahoɔden na yɛde dii Karnaim so ana?”
14Nea Asafo Awurade Nyankopɔn se ni: “Mɛhwanyan ɔman bi abetia mo, Israelfo,
nea ɔbɛhyɛ mo so afi Lebo Hamat akosi Araba bon mu.”
AKCB : Amos 6